MVRK: Kuvhurwa kweiyo 3D Virtual Chiitiko | Martech Zone
MVRK: Kuvhurwa kweiyo 3D Virtual Chiitiko
Vhiki rapfuura ndakakokwa kushanya kwangu kwekutanga kwe online virtual musangano nzvimbo. Kutaura chokwadi, iyo nguva yekukiya yaive mukutamba uye ini ndaifunga kuti chingave chishandiso chakanaka, ndaive neshungu kuti zvinogona kunge zviri zvakare geeky uye inogona kusakwezva mabhizimusi makuru. Ndakafunga kuti zvinogona kunge zvakaita sekutamba mutambo wevhidhiyo pane kunyatsove mune inonyudza nzvimbo yebhizinesi.
Nekudaro, kushanya nemushandisi uyo akandikoka chaizvo kwakandiorora uye kuva netariro nezvechiitiko ichi:
Kuzvifambisa wega - Ini ndakakwanisa kufamba nemuchadenga, kucherechedza mavhidhiyo kana mharidzo, uye kusangana nevanhu pachezvangu.
1: 1 Kukurukurirana - Ini ndakakwanisa kutanga nekutaurirana nevanhu mumakamuri chaiwo umo hurukuro nezviratidziro zvaiitika pakati pedu pasina mumwe munhu.
Kunyudza Chiitiko - Ruzivo rwese rwusina kufanana nemutambo wevhidhiyo zvachose, zvainge zvisina basa uye mushandisi-ushamwari. Ini ndaigona kunyatsoona mumwe munhu anga asiri wehunyanzvi savvy achinakirwa nayo.
Tumira Lockdown - Ini ndaigona kunyatsoona pasi penzira iyo kambani yaigona kuve neinoitika chiitiko uye chiitiko chaicho panguva imwe chete neiyi tekinoroji.
Mumwe mutambi mumusika uyu MVRK, vari kuunza Vx360 kumusika. Iyo chikuva inogadzira tsika-yakavakirwa nharaunda inoshandura iyo webhu kuita hupenyu-hwakaita zviitiko zvechokwadi izvo zvinowedzerawo kusvika uye analytics senge zvisati zvamboitika.
Ichishandisa Vx360, MVRK inovandudza zvachose tsika maratidziro enzvimbo anoita iyo dijitari-chete chiitiko chinzwe senzvimbo yepasirese yepasi kuburikidza nemhando yepamusoro magiraidhi uye machira ane 360-degree kutsvagurudza uye kufamba kwehupenyu-senge chiitiko. Vashanyi nevanoenda vanofamba-famba nemamiriro ekunze kuburikidza nedesktop kana nharembozha, vachiona makamuri akasiyana, kudyidzana, nezvimwe.
MVRK's Vx360 chikuva chakapfuma nekuunganidza vanhu uye nemushandisi mukana wekuita mukana kuburikidza neraibhurari yayo yezvakakosha-maficha ayo anogona kuve akagadzirwa-akagadzirirwa kune chaiwo zvido uye matanho ne:
Yakapindirwa inofambidzana Vhidhiyo-On-Kudiwa (VOD) zvemukati
Rarama rwizi kugona
Nzira mbiri dzekutaurirana kusangana
Yakawedzerwa analytics yekutevera
WebXR uye mamwe akavhenganiswa echokwadi kunyorera
Iyo mikana yekuti mabrand uye maindasitiri akasiyana siyana anogona sei kushandisa iyi nyowani yekunyudza ruzivo haina muganho. Kuwedzera pamusoro pemisangano kune mamwe marudzi emhando uye IP, senge:
Tora varaidzo padanho rinotevera - Zvikwata mumaindasitiri zvakaita sekushambadzira masevhisi, firimu uye kutsikisa zvinogona kukwidzirisa maitiro anoita vanhu vatambi uye mitsetse yekuronga nekutora mafeni zvakadzama munyika dzavanofarira uye kuvabvumidza kuti vashanyire kakawanda sezvavanoda, pavanenge vachida. Kushanda kwemwaka mutsva kana zvemukati zvakawedzera kusvika kunze kwemagariro epop-ups kubvumira ose fan yekuita.
Ipa chigadzirwa chinotangisa chisati chamboitika - Kuwedzera inonyudza yewebhu chinhu kune chitsva chigadzirwa chinotanga zvino zvinoreva zvinopfuura zvinowirirana webhusaiti. Kugadzira kwekumisikidza hakuzivi miganho nenzvimbo dzakagadzirwa neVx360 uye vashandisi vanogashira yakakwidziridzwa yerudzi rwechiitiko kuti vaperekedze chinobatika chinopa.
Chinja mune-zvemunhu zviitiko uye misangano - Iine izvo zvinyowani zvitsva zve-zvemunhu zvibatanidzwa, mabrand anokwanisa kuendesa zvinomanikidza dumba, ratidziro kana zviitiko zvezviitiko kune nyika yedhijitari uko varipo vanogona kufamba vachipoterera nzvimbo yakawandisa yezvisingakanganwike uye zvinowirirana zvemukati weprimiyamu kubva kune vakasiyana siyana vanotsigira uye brand brand. Iyo chikuva inogona zvakare kuve pairi ne-mu-zviitiko zviitiko kuti zviwedzere kusvika kwepasirese.
Ichi ndicho chizvarwa chinotevera chezviitiko zvine chekuita nemhando; chiyero chitsva chisina miganho. Iyo tekinoroji kufambira mberi kwataive nako mumabasa nyika yedu isati yatarisira uye yaida shanduko kune dhijitari uye chaiwo zviitiko Inonyanya kukosha izvozvi, uye isu tinotenda kuti inochinja kuti mabrands anokura sei uye nekudyidzana nekuti zvinovatendera kuti vape zvakawanda - hunyanzvi, hunyanzvi, ruzivo rwakawanda. Iyo inogadzira akawanda akasimba ekubata mapoinzi kuunza aripo uye anogona mafeni kuenda kumberi muchiratidzo pazviitiko zviitiko, misangano, kumisikidza uye kuratidzira.
Steve Alexander, muvambi uye Chief Chiitiko Officer weMVRK
Kufarira kuona kuti chiitiko cheVx360 chakaita sei?
Tags: chiitikomvvchiitiko chaichovx360
Kuongororazve B2B Kushambadzira Kunze? Heano Maitiro Ekutora Kukunda Campaigns